I-Barcelona, ​​yazi ngaphandle kokushiya ikhaya neencwadi ezilungileyo | Uncwadi lwangoku
I-Barcelona, ​​yazi ngaphandle kokushiya ikhaya
Ukwazi iBarcelona ngaphandle kokubeka unyawo ngaphandle kwendlu kunokwenzeka: ngoncedo lwesihloko esihle apho umlinganiswa ophambili esi sixeko sihle. Kolu shicilelo uyakufumana uluhlu oluncinci, kodwa olupheleleyo lweencwadi ezisixhenxe eziza kukusa kuzo zonke iikona, amavumba, incasa kunye nemibala yendawo enkulu yaseSpain.
Ewe ufunda ngokuchanekileyo, isixhenxe, kuba sikholelwa ukuba isibini asonelanga. Uhambo oluya kwiileta lufihliwe emva kwayo nayiphi na le misebenzi. Nawuphi na umfundi, nokuba ungoyena mncinci unomdla, angangqina ukuba kulula kangakanani ukufumana iindawo ezintsha ngokuguqula amaphepha. Yiza, fumanisa into onokungayazi ngezi zinto zilandelayo Iincwadi malunga neBarcelona:
1 I-Barcelona ibalulekile
2 Ubugcisa beSitalato i-Barcelona. ISpanish
3 I-Barcelona. Ushicilelo lwePocket
4 I-Barcelona. Ushicilelo lweDeluxe
5 I-Barcelona. Isixeko sikaGaudí
6 Isikhokelo esisemthethweni saseBarcelona
7 Imephu yeBarcelona. IsiNgesi
I-Barcelona ibalulekile ..
Kule ncwadi, uJosep Liz Rodríguez kunye noBiel Puig Ventura banikezela ukhenketho olupheleleyo lweBarcelona. Sisikhokelo kwezona ndawo ziphambili kwaye zibalulekile ekufuneka zaziwe xa undwendwela esi sixeko. Inezona zikhumbuzo zidumileyo: iimyuziyam, izikwere, izakhiwo, izitalato nokunye.
I-Barcelona ibalulekile Isihloko esigxininisa iyantlukwano yoyilo loyilo lweBarcelona. Ukongeza ekufumaneni isikhokelo sokuhamba, abafundi baya kuba nakho ukufikelela kwiinyani ezinomdla malunga nolwakhiwo lwesixeko. Njengaye, umzekelo, iindlela ezahlukeneyo zokwakha eziye zaphuhla ekuhambeni kwexesha. Kukho neenkcubeko ezahlukeneyo ezazinempembelelo ukusuka kumaxesha amaRoma ukuza kuthi ga ngoku.
Ababhali: UJosep Liz Rodríguez, uBiel Puig Ventura.
Umpapashi: Iiposi zontathu, SL
Unyaka wokupapashwa: 2013.
Inani lamaphepha: 128.
Ubugcisa beSitalato i-Barcelona. ISpanish
Ubugcisa beSitalato i-Barcelona. ISpanish.
Le ncwadi yenziwe kuba iBarcelona ingaphezulu kwezakhiwo ezintle. Kangangeenkulungwane esi sixeko besisoloko siyintsika yamagcisa amaninzi. Abanye abadumileyo, abanjengoGaudí, uPiccaso, uDalí noMiró. Abalinganiswa abathi, ngandlela thile, banegalelo kwinkcubeko ye-Barcelona. Kwaye, izidalwa ezishiye uphawu eSpain nakwihlabathi liphela ngetalente yazo.
Namhlanje, ilifa lakhe liyaqhubeka, kuba I-Barcelona sisixeko esikhwaza "ubugcisa" kwikona nganye. Kwaye kanye yile nto umfundi aya kuyifumana emsebenzini. Ubugcisa beSitalato i-Barcelona. ISpanish. Le yincwadi yemizobo ekumemela ukuba uhambe kwaye wonwabele ezona mizobo mikhulu esixekweni, izitrato zayo. Amaphepha ayo akuvumela ukuba ube nomfanekiso ngqondweni wesimbo sokubonisa esahluke mpela kwinto yesiqhelo, leyo kunqabile ukuba iboniswe kwizikhokelo zabakhenkethi. Kumgca ngamnye ungabona icandelo, nokuba kunjalo, libalulekile: ubugcisa basesitratweni.
Umbhali: uLouis Bou.
Umshicileli: Josep M. Minguet.
Umshicileli: Ushicilelo lweTrans-Atlantic; Ushicilelo lweeLwimi ezimbini.
Unyaka wokupapashwa: 2010.
Inani lamaphepha: 352.
I-Barcelona. Ushicilelo lwePocket
I-Barcelona. Ushicilelo lwepokotho.
I-Barcelona: inkcubeko enkulu kunye nedolophu enkulu Sisona sihloko sigqibeleleyo sokwazi esi sixeko sidlamkileyo saseSpain ngosuku olunye. Ngaphezulu kweefoto zobungcali ezingama-225 zenza incwadi enobungakanani obukhulu bepokotho. Nangona kunjalo, ayisiyogalari ebonakalayo kuphela.
Le mveliso yokuhlela inolwazi lwembali ebaluleke kakhulu. Inedatha enceda umfundi ukuba ayazi ngokwenyani iBarcelona, ​​kuba yayisekwe ngamaRoma, kude kube ziintsuku zayo zangoku. Apha kuyahlaziywa inkcubeko, ubugcisa kwaye ngakumbi ubugcisa bokuvela kwesi sixeko. Kwaye, ewe, imiba eyenze ukuba ibe yindawo ekubhekiswa kuyo eYurophu kwimicimbi emikhulu yezentlalo kunye nezobugcisa ayilahlekanga kuyo.
Umbhali: Vv. Ewe.
Umshicileli: Dos de Arte Ediciones, SL (iSpanish)
Unyaka wokupapashwa: 2015.
Inani lamaphepha: 96.
I-Barcelona. Ushicilelo lweDeluxe
I-Barcelona. Ushicilelo lodidi
I-Barcelona: isixeko se-avant-garde Yincwadi ekumemela ukuba undwendwele enye yezona zihloko ziphambili zeMeditera kwiklasi yokuqala. Kolu hlelo lwe-deluxe, ngesiciko esilukhuni, umfundi uya kufumana isikhokelo esipheleleyo sedolophu enkulu yaseBarcelona. Nabani na onomsebenzi uya kuba nakho ukuhamba ngedolophu yakudala, enezinto zokwakha zaseRoma, de afikelele kubonakaliso ngalunye lwala maxesha.
Esi sihloko sigxile ekuphakamiseni ilifa lenkcubeko elikhulu iBarcelona enalo. Ewe, into efanayo eyenze ukuba ibonakale njengendawo yokuhlangana kwilizwekazi laseYurophu. Enye into ebalaseleyo kule ncwadi ngumgangatho wabemi beBarcelona. Ugxininiso apha kuhlobo lwabantu abadumileyo- abayili, abazobi, iimbongi - abazalelwe kwesi sixeko.
Umshicileli: Dos de Arte Ediciones, SL
Unyaka wokupapashwa: 2015. (iSpanish).
Inani lamaphepha: 168.
I-Barcelona. Isixeko sikaGaudí
I-Barcelona. Isixeko saseGaudí.
I-Barcelona ngumxube ogqibeleleyo we-quirkiness kunye nokulula. Namhlanje, kodwa nembali. Icocekile, kwaye, kwangaxeshanye, ezidolophini. Inokulinganisela okugqibeleleyo kwaye yile nto imelwe kwisihloko I-Barcelona. Isixeko sikaGaudí. Le ncwadi ayimemi nje kuphela ukuba undwendwele iindawo ezinomdla kubakhenkethi, ikwacebisa ukuba umfundi aphile ngamava.
Umxholo walo msebenzi unamava. Thetha ngeendawo ezibalulekileyo esixekweni, iimyuziyam, imifanekiso eqingqiweyo kunye nemeko-bume. Injalo imeko kaGaudí iLa Sagrada Familia, ilitye lesikhumbuzo e-Barcelona. Kodwa, ikwaqaqambisa ezinye izihloko ezinje ngobusuku basebusuku kunye nemisebenzi yolonwabo ekhoyo. Inegalari enkulu yeefoto, iimephu ezisebenzisanayo, iinyani zokuzonwabisa, ulwazi lwembali kunye nokunye okuninzi kumthombo omnye.
Umbhali: Llátzer Moix.
Iifoto: Pere Vivas.
Umpapashi: Iiposi zeTriangle.
Unyaka wokupapashwa: 2018.
Isikhokelo esisemthethweni saseBarcelona
Isikhokelo esisemthethweni seBarcelona.
Nangona incinci, iBarcelona ineendlela ezahlukeneyo zezitrato, ubumelwane, izikwere kunye neepaki. Ukubeka nje, kulula kakhulu ukuba ulahleke okanye uzive uphazamisekile kwidolophu yakho. Eyona ndlela yokuzifumana kwaye wenze konke okukuko kwesi sixeko kukusebenzisa isihloko, I-Barcelona. Isixeko, sidutyulwe.
Esi sikhokelo siqulathe ngaphezulu kweemephu ezisebenzayo ezingama-20 zokuziqhelanisa nekomkhulu leMeditera kwaye uhambe ujikeleze kulo njengaye nawuphi na wendawo. Amaphepha ayo asisa ukuba sityelele iindawo ezibonisa umzi kunye nemisebenzi yamagcisa aphambili; nokuba ngeenyawo okanye ngokuhamba. Ikwabonelela ngolwazi ngeminyhadala, kwezenkcubeko, kwezemidlalo nakwimisitho yomculo. Okokugqibela, inika uluhlu lweengcebiso malunga nokutya okupheleleyo kwesixeko sonke.
Umbhali: Josep Liz Rodriguez, Llátzer Moix Puig, Ricard Regàs Iglesias.
Unyaka wokupapashwa: 2016.
Inani lamaphepha: 160.
Imephu yeBarcelona. IsiNgesi
Imephu yeBarcelona. IsiNgesi.
Imephu yeBarcelona ngesiNgesi sisixhobo esifanelekileyo sokwazi kwikona nganye yesixeko. Ezi zinto zokuhlela zinamacala amabini zenziwe ngephepha elingenamanzi, elingenakuqhekeka. Inezitrato zonke, iindlela kunye nemimandla yaseBarcelona, ​​nganye ichazwe ngamagama ayo. Ikwenzile iindlela zothutho lukawonkewonke, amaziko okuthenga, iivenkile eziphambili kunye neendawo zokuhlangana ezinje ngezikwere neepaki.
Imephu ibalaselisa ezi ndawo zilandelayo zomdla: La Rambla, Montjuic, zonke iimyuziyam kunye nayo yonke imisebenzi yaseGaudí. Ukongeza, ineendawo ezinezitayile ezahlukeneyo, ezinje, umzekelo, iGothic, i-Barcelona yangoku kunye neyangoku. Zonke zichazwe kakuhle.
Inani lamaphepha: 0.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iincwadi » Iincwadi » I-Barcelona, ​​yazi ngaphandle kokushiya ikhaya
Indlela yokubhala ibali
Iincwadi zikaSarah Lark